Yiziphi izimonyo ngesisekelo black caviar? Uyini umlando ivela khona? Yini izakhiwo it has futhi kungani ukhethwa amadoda nabesifazane abaningi abafuna ukulondoloza ubuhle kanye ngobusha ibala.
Muhle ngesisekelo black caviar, edlule kwakubonakala sengathi isikhathi esingakanani? Umlando walo waqala ngo-1964. Kwakuphakathi nalesi sikhathi omunye isihambi, u-Ingrid Millet ngaphawula Eqinisweni isimanga. Njengoba yabuka umsebenzi abesifazane abasebenza ezindaweni lapho kusetshenzwe caviar. ukunakwa wakhe ngasondelana izandla salaba bantu besifazane. Isikhumba kubo bheka abasha fresh. Wayengumngane omncane kakhulu kunawe isikhumba ubuso laba besifazane abasebenza.
Kuchazwa kanjani-ke isici okufana? Into wukuthi izandla zabo njalo nabo nezibiliboco, okuyinto ine anti-ukuguga izakhiwo. Ngesisekelo baphawula lokhu kwaba ucwaningo ehlelekile okuhloswe ngaso ukutadisha izakhiwo black caviar.
Kuze kube manje, eRussia ungathenga eliphezulu izimonyo Israeli Mon Platin, wenza ngesisekelo black caviar. Kukhona lonke umugqa izimonyo eyaziwa ngokuthi black caviar Collection ngamunye umkhiqizo lo mugqa yezimonyo iphathelene izimonyo ukunethezeka zibiza lihlukile.
Imiphumela Excellent ukuthi bungatholakala usebenzisa lezi izimonyo ukuthethelela noma yikuphi izindleko ezihlobene yokufuna yayo. Yikuphi uchungechunge ungabahlukanisa kusuka iqoqo izimonyo ezenziwe ngesisekelo caviar? Nazi ezinye zazo:
Collection izimonyo ebusweni ukunakekelwa. Enye yemikhiqizo esiyingqayizivele - asenze anti-umbimbi ukhilimu. Anti-ukuguga izakhiwo ukhilimu ngenxa emakamu eliphezulu, kuba akhiphe engokwemvelo-black caviar. Ngemva uyisebenzisa, isikhumba kuba ukuqina futhi kuyaqina.
Okunye uchungechunge - izimonyo ekunakekeleni izinwele. Kulolu chungechunge, kukhona amashampu ezisiza ukubuyisela izinwele impilo futhi enothisa black zabo nezibiliboco akhiphe. Futhi ukwelashwa olunzulu izinwele isebenzisa izinwele imaski ekhethekile ukusiza ukubuyisela impilo izinwele ezinemibala lilimele.
Esinye isici esibalulekile uchungechunge imikhiqizo esekelwe nezibiliboco, eyenzelwe mnene nokunakekela umzimba. iyogathi zokwelapha likhona phakathi imikhiqizo kusikiselwa umzimba, peelings ezahlukene kanye nectars.
Statics kanye namandla okubakhona Ukwakheka: izibonelo sokunquma
Indlela ukukhetha uphethiloli kuya injini?